Iyo yerabha yakanyorova zvikamu zvakakurisa kupfeka kuramba uye ngura kuramba, inowanzo shandiswa kune acid inoshanda mamiriro. Zvakadai tailing mune yekuchera indasitiri, slurry ine zvidiki zvidiki uye isina yakaoma micheto. Chikamu chese chinofambisa chinosanganisira Cover Plate Liner, Huro bushing, Frame ndiro liner, Furemu Plate Liner Isa. Irabha zvinhu zvataishandisa zvine masimba ekumiririra kune zvimwe zvese zvinhu mune yakanaka tunhu slurry mafomu. Iyo antioxidants uye anti degradents anoshandiswa mune edu zvinhu anga ari ...
Slurry pombi yerabha liners inonyorova zvikamu mune yerabha yakarongedzwa slurry pombi iyo inotungamira slurries kune iyo pombi nzira. Mazhinji mabara akarongedzwa slurry pombi anoshandisa kupatsanura volute mhando yerabha liners, imwe furemu ndiro liner, uye imwe chivharo ndiro liner, chimiro ichi chakagadzirirwa kuti kutsiva zvive nyore. Yedu slurry pombi yerabha liners inowanzo gadzirwa muprimiyamu chaiyo yerabha R55 iyo inopa 1.5 nguva yehupenyu hupenyu hweyakajairwa liner rabha R26. * L-Type Slurry Pumps impeller Dhata Model Impeller kodhi ...
Yedu mahydrocyclones zvikamu zvinokwana 100% kuchinjaniswa nemhando dzinozivikanwa dzenyika. Yakakwira mhando R55 rabha inoshandiswa YAAO yakazvipira kuita kugona mukushandira vatengi uye kugutsikana. Isu tinopa vatengi vedu sarudzo uye kuburikidza neyedu hydrocyclone yekupfeka linings, isu tinovavarira kudzikisa yako yekugadzirisa nguva uye mutengo uye kuzadzikiswa kuita kusinga tsanangurike kune ako hydrocyclones. Zvimiro & Bhenefiti YAAO Hydrocyclone Liner yakaratidza kunaka kwayo kwepamusoro uye nemutengo unoshanda nekushandisa-mumunda kwevatengi vedu worldw ...
Chigadzirwa sumo Slurry pombi impeller inogona kutamba chinzvimbo chakakosha mukushanda kwe slurry pombi. Nekutenderera, inogona kubatsira slurry pombi kusangana nezvinodiwa zvemidziyo. Iyo slurry pombi impeller iri nyore kuve yakasakara, saka isu tinotsvaga yakakosha zvinhu kuti tiwedzere hupenyu hwehupenyu hwechimisikidzo. Rubha slurry pump impellers anoshandiswa kugadzirisa iyo inoparadza slurry ine blunt particles. Izvo zvakagadzirwa neakasikwa rubber, synthetic rubber, EPDM Rubber, Nitrile Rubber, kana chero imwe se ...
Iyo yerabha yakanyorova zvikamu zvakakurisa kupfeka kuramba uye ngura kuramba, inowanzo shandiswa kune acid inoshanda mamiriro. Zvakadai tailing mune yekuchera indasitiri, slurry ine zvidiki zvidiki uye isina yakaoma micheto. Chikamu chese chinofambisa chinosanganisira Cover Plate Liner, Huro bushing, Frame ndiro liner, Furemu Plate Liner Isa. Irabha zvinhu zvataishandisa zvine masimba ekumiririra kune zvimwe zvese zvinhu mune yakanaka tunhu slurry mafomu. Iwo ma antioxidants uye anti degradents anoshandiswa mune edu zvinhu ane nyuchi ...
Slurry Pump Expeller Mhete inoshandiswa kune AH / HH / L / M slurry pombi, Iyo yekudzinga mhete iri pamwe inoshanda pamwe nekutengesa kune iyo slurry pombi. Ivo havagone chete kubatsira kuvhara pombi, asi zvakare kudzikisa simba re centrifugal. Iyo dhizaini uye izvo zvinhu zvemutengesi zvakakosha kune hupenyu hwayo hwebasa.Ichi chisimbiso chakakodzera kune akawanda slurry ekupomba ekunyorera. Inopa mukana wakakura wekuti hapana gland mvura inodiwa. Anodzinga anomhanya mumhete yezvinhu zvakafanana uye achishanda nemavanes kumashure f ...